I-Binance e-Afrika: Ukunyuka kwenani labasebenzisi abatsha baseAfrika-iCazoo
Ikhaya » Ikhaya » I-Binance e-Afrika: Kurekhodwe ukunyuka kwenani labasebenzisi abatsha baseAfrika
tag: Binance eAfrika
Iikhredithi zeefoto: Muhammadtaha Ibrahim Ma'aji
Ndabelana ngeendaba ezinomdla kakhulu, endikhe ndafunda ngazo punching.com. Ndijonge kula mazwe amaxabiso awo angavumeli ukuzimela kwezoqoqosho, kwaye ndiyabona kwi blockchain nakwimiba yabo yezemali isisombululo. Kule mihla yeempawu ezinamandla zokufika komjikelo kuthwala i marike (NgoMeyi 2021), kubonakala ngathi kukuphambana ukuthatha isigqibo sokusebenzisa i-cryptocurrensets njengemali kubomi benene. Iboyikisa kakhulu ukungazinzi. Kodwa lumka! I-Crypto namhlanje yimbonakalo ye-blockchain. Ngaba kukho umzekelo iziseko zemali? Siza kuthetha ngazo kungekudala kuba sisihloko esibalulekileyo. Ukuba ungxamile kwaye ufuna ukuthenga ingqekembe ezinzileyo, ungayenza kwiBinance ngokuthumela kwam, ngokucofa apha. Uya kuhlala unesaphulelo se-20% kwimirhumo yotshintshiselwano.
Ingaba eli lixesha lakho lokuqala ukufunda la maphepha? Ndiyavuya ukukwazi.
Ndizama, xa ndinako, ukuhlaziya le logbook ngeendaba, kodwa ngaphezulu kwayo yonke into enomdla endiyifumanayo kwihlabathi lee-cryptocurrensets kunye ne-blockchains. Olu khenketho ndifumene inqaku elinomdla.
Ithi uBinance uxele ukunyuka kwenani labasebenzisi baseAfrika kwiqonga layo, apho umthamo wentengiselwano ye-cryptocurrency inyuke nge-28,61% phakathi kukaJanuwari no-Epreli 2021.
Inkampani ifumene ukonyuka kweepesenti ze-2.228,21 kubasebenzisi be-P2P kwiqonga layo, kwaye I-386,93% yepesenti yemithamo ye-P2P e-Afrika iphela. Kwakukho I-114,33% yepesenti inyuke kubasebenzisi kwiAfrika iphela phakathi kukaJanuwari no-Epreli 2021.
Ilizwe leemali ezi-cryptocurrensets liyaqhubeka nokutsala kungekuphela amehlo eenkampani ezinkulu, kodwa nezipaji (mhlawumbi i-e-wallet 😉): U-Ernst & Young Global Ltd ubhengeze ukuba utyala imali kwizigidi ezili-100 zeedola kwitekhnoloji ye-blockchain. Inkampani ityale esi sixa kuphando, ubunjineli kunye neenkonzo zetekhnoloji ye-blockchain kunye neeasethi ze-crypto. UMongameli we-EY wehlabathi kunye ne-CEO uCarmine Di Sibio uthe: “Kule minyaka mihlanu idlulileyo, sityale imali kwi-blockchain kwaye sakha izisombululo ezitsha, ukuseka i-E & Y njengenkokeli kolu shishino lusakhulayo. Njengokuba ukwamkelwa kwe-blockchain kuyaqhubeka nokukhula kwaye sibona ukwanda kweemfuno kubathengi be-E & Y, sonwabile malunga notyalo mali lwe-E & Y ukuhlangabezana nemiceli mngeni kunye neemfuno zabo. "
Ngaphandle kwento ethethwa ngulo mfo kunye nale nkampani, ukwanda kokwamkelwa kwe-Afrika kweqonga lokutshintshiselana Binance Ndicinga ukuba inomdla kakhulu. Amazwe anjengeNigeria, uMzantsi Afrika, i-Egypt, i-Algeria, iMorocco, iKenya, i-Angola, i-Ethiopia, iGhana, iTanzania, angamazwe amakhulu, anamashumi namashumi ezigidi zabantu, amanye angamakhulu, anokufumana ukufikelela kwimali yobuqu, nokuba ikwindawo enye okanye abelwe abaphantsi amagunya, kwaye babe nezinto zabo. Ngaphandle kwabalamli, ngaphandle kokuzithemba iibhanki. Kwabaninzi kunzima ukufikelela ebhankini, kungasathethwa ke ngeakhawunti yebhanki.
Kwaye ulumke, apha andithethi ngokuqagela kwezezimali, kodwa ndithetha ngephupha lombongo lokuba ngumxhasi wekamva lakho lezoqoqosho, ngaphandle kokuxhomekeka kumzimba ophakathi ukuba ukuba uyandithanda awundenzi ndihlawule ukuthumela Ndithumele ileta egodukayo indixelela ukuba ithathe isigqibo sokutshintsha isivumelwano.
Ukuba ufuna ukujoyina iBinance kwaye awazi ukuba ungayenza njani, ulifunde kakubi eli nqaku. Kodwa kubi kakhulu! Kwaye awukhange ucofe nakweyiphi na ikhonkco oluhlaza.